Oradyahannada Taansaaniya: Maalgalinta cayaaruhu waxay horseedi doontaa guulo
Oradyahannada reer Taansaaniya ayaa ku doodaya in dawladdu la gudboon tahay in ay si intan ka baddan u maa-lgaliso qaab-dhismeedka cayaaraha haddii ay cayaartoyga ka filayso inay orod fiican ku soo bandhigaan cayaaraha lagu tartamayo.
Njunguda Isegwe oo ka socda Taansaaniya oo hoggaaminaaya orodka bilawgi Cayaarahii Commonwealth-ka ee 2006-kii ee maaradoonka raga ee ka dhacay Melbourne, Australia. Orodyahanka Taansaaniya u dhashay ee Samson Ramadhani ayaa ku guulaystay orodkaasi halka Isegwe la xanibmay dhaawac ka soo gaaray muruqa bowdada. [Peter Parks/AFP]
Tanzania oo qawaaniini u dejisay hay’adaha ammaahda danyarta
Toddobaadkii la soo dhaafay ayuu Wasiirka Warfaafinta, Dhalinyarada, Dhaqanka iyo Cayaaraha Emmanuel Nchimbi wuxuu muujiyay sida uu uga xumaaday cayaartii orodka ee ay Taansaaniya ku soo bandhigtay Maaradoonkii Kilimanjaro, kaasi oo ay awooddiisa lahaayeen orodyahannada ka socoday Kenya, oo ku guulaystay tartamadii orod ee ragga iyo dumarkaba.
“Waa wax aad looga yaxyaxo in aan aragno oradyahannadeennii oo fashilaya iyaga oo jooga dhulkoodii oo waliba hortaagan taageerayaashooda," ayuu yiri wasiirku isagoo ku baaqay cayrinta madaxda ayan kooxahoodu orodka fiican soo bandhigin.
Gidamis Shahanga oo billada dahabka ku qaatay Cayaarahii Commonwealth ee dhacay 1978 iyo 1982-kii ayaa dhibaatadada jirta u aaneeyay sababtoo ah dawladdu wax maal-galin ah kuma samaynin cayaaraha, taasoo markeedana keentay in uu dalku ku fashilo in uu kaalimo sare ka galo tartanka. “[Dawladdu] xataa hal senti kuma maal-galiso cayaaraha fudud, laakiin waxay dhaqaale badan ku bixisaa marti-galinta tartanada caalamiga ah,” ayuu yiri Shahanga.
Jacqueline Sakiro oo ah orodyahannad Taansaaniya u dhalatay oo orodda oradka masaafadiisu dhexdhexaadka tahay oo ka qaybqaadatay tartanka ayaa sheegtay inay dareentay mid taasi la mid ah.
“Cayaartooy ahaan waxaan oran karaa guuldaradayada waxaa sababtay dawladda. Dawladdu nama taageerto. Ma aadno xerooyinka lagu tababarto, waxannu ku tababarannaa lacagteena, laakiin kaliya waxay rabaan inay arkaan annagoo guulaysanayna… tanina wa mid aan suurta gal ahayn,” ayay tiri Sakiro Waxay tiri dawladdu waa inay mushahar siisaa tababarayaasha, ayna orodyahannada ku ururiyaan xarumaha tababarada waana inay qabtaan kulan si ay u oggaadaan fikradaha cayaartooyda ee ku aaddan siddii loo wanaajin lahaa bandhiggooda cayaareed. Ka qaybqaadasho la’aanta haweenka ee cayaaraha ayaa sidoo kale ah mid walaac laga qabo, ayay Sakiro tiri, iyadoo hadalka intaa ku sii daraysa wax in tirada haweenka orodyahannada ah ee dalku aysannadkasta hoos u dhacdo.
Waxaan u baahanahay in lala yimaado dadaallo gaar ah, sababtoo ah gabdhaha intooda badani mar hadday guursadaan dib dambe ugama qayb-qaataan cayaaraha fudud. Waxaa laga yaabaa in ragga qabaa ay waxoogaa dhibsadaan labiskooda,” ayay tiri Sakiro. Shaban Hiki oo tababara Ngome oo ah Kooxda Cayaartooyda Ciidamada Difaaca Dadka Taansaaniya (TPDF), ayaa sheegay in Nchimbi oo aanu xaq ahayn inuu eedeeyo orodyahannada. “Siday wax u socdaan maaha mid wax cajab-galinaya, waxaa laga yaabaa in uu la yaabay orodka la soo bandhigay, laakiin waa inuu xasuusnaadaa waxa sababay,” ayuu yiri Hiki. Hiki oo tababaraha orodka gaaban, tartanada kale sida boodada, orodka masaafadiisu dhex-dhexaadka tahay iyo oradka dheer ayaa si xiriir ah loogu magacaabaa tababaraha xulka qaranka Taansaaniya ee cayaaraha fudud. Wuxuu u sheegay Sabahi in dawladdu ay hubiso inay kafaalo-qaado sidoo kalena dhaqaale siiso barnaamijyada tababarka ee kooxaha cayaaraha fudud. Hadalka oo gaaban sheekadu isma badalayso,” ayuu yiri Hiki.
Marka laga yimaado orodyahannada Taansaaniya ee ka qaybqaatay orodkii maaradoonka Kilimanjaro, Hiki wuxuu sheegay in orodyahannadii ka socday Kenya ay ahaayeen kuwo dhiiran, si fiican u tababaran sidoo kale qiyaasida wakhtigoodu ay fiicnayd. Waayadii hore Taansaaniya waxay soo saartay orodyahanno adag siddii ay u soo saartay oo kale ayuu yiri Hiki, sida orodyahankii rug cadaaga ahaa ee Juma Ikangaa, Filbert Bayi iyo Suleiman Nyambui kuwaasi oo ahaa kuwo aad u tababaran si fiicana loo daryeelay ka hor intii ayna helin aqoonsi cayaartooy oo caalami ah. Hiki wuxuu yiri Taansaaniya orodka maaradoonka kama gaarin guul dhab ha ilaa iyo markii Samson Ramadhani uu biladda dahabka ah ku guulaystay Cayaarihii Commonwealth-ka ee ka dhacay Melbourne, dalka Australia. Wakthigaasi ka hor Francis Naali oo Taansaaniya u dhashay ayaa la soo hoyday biladii dahabka ahayd Cayaarihii Commonwealth-ka ee 2002-dii ka dhacay Manchester, Boqortooyada Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee Hiki wuxuu sheegay in guul-gaaridii sannadihii la soo dhaafay aanan lala barbar dhigi karin tii sannadkii 1970-kii xilligaa oo orodyahannada Tansaaniya ay billadaha ka soo aruursan jireen madal walba oo ay isku arkaan waddamada barwaaqo-sooranku iyo waliba kuwa All African Games. Nchimbi wuxuu sheegay in wasaaradiisu ay garawsatay dhibaatada ku saabsan dhaqaalaha aan ku filnayn ee la siiyo kooxaha ay dawladdu leedahay sida Mgome oo kale. “Waxaan oggaanay dhibaatada la sheegay, jawaabaha ka soo baxaya bishan, waxaan waydiisanay dhammaan ururada cayaaraha inay barnaamijyadooda u soo gudbiyaan dawladda iyadoo ay si faahfaahsan u kala cadaynayaan wixii taageero ah ee ay uga baahan yihiin dawladda, qorshahooda iyo wixii ay ka filayaan inay ka soo baxaan,” ayuu Nchimbi u sheegay Sabahi.
“Waan hubaa inaan qaban doono wixii aan kari karno si aan u taageerno,” ayuu yiri Nchimbi. “Laakiin waxkasta oo uu arinku yahay, waa inayan iga filin inaan ku ammaano orodkii tayadiisu hooseeyay ee ay soo bandhigeen.” Ma jeclaysatay maqaalkan?
January 12, 2015 @ 07:30:08AM
Orodyahanada qaarkood ma casuumi kartaan si ay dalkiina ugu ordaan